Chengetedza mafoto ako uye mavhidhiyo neKachengeteka Photo + Vhidhiyo | IPhone nhau
Dzivirira mifananidzo yako uye mavhidhiyo neKachengeteka Photo + Vhidhiyo
Chizvarwa chega chega chitsva chinotangwa neApple pamusika, sevamwe vagadziri, chinotipa kunatsurudzwa kwakakosha muhunhu hwekamera, chinhu chakakosha chevashandisi vazhinji, nekuti tinochishandisa mazuva ese kutora nguva dzatinoda kunyanya.kana kufarira. Asi dzimwe nguva tinogona kusada kugovana mamwe mafoto nevanhu kuti hapana anogona kuwana mudziyo wedu anogona kuawana. Kuti udzivise izvi, mhinduro yakanakisa ndeye chengetedza kupinda kune aya mafoto ne password kuitira kuti chete muridzi wechigadzirwa awane iwo.
Kudzivirirwa Photo + Vhidhiyo inotibvumidza kuchengetedza edu anodikanwa mifananidzo uye mavhidhiyo anowanikwa pane yedu iPhone, asi zvakare inotibvumidza isu kuteedzera mifananidzo kana mavhidhiyo atinoda kuburikidza iTunes gara uine ruoko pane yedu iPhone. Iko kushanda kwekushandisa kuri nyore kwazvo, nekuti tikangoivhura isu tinokwanisa kugadzira maalbham akasiyana ekuisa mifananidzo iyo yatinoda kuti igare yakachengeteka. Kana tangogadzira iyo albha tinofanirwa kuenda kune reel ye iPhone yedu uye kuendesa ese mafoto nemavhidhiyo atinoda kuve takadzivirirwa.
Zviripachena, kana maitiro ekupinza apedza, iwo mavhidhiyo nemavhidhiyo anowanikwa muSafetey Photo + Vhidhiyo, saka tinofanira enderera kuadzima kubva patiri reel pasina kutya kwekusagona kuzvidzorera zvakare, nekuti zvinodzivirirwa kuburikidza nechishandiso. Uyezve, kana tikasazviita, hazvina musoro kushandisa chishandiso ichi.
Iyo app inotsigira Kubata ID, saka hazvizove zvakakosha kuisa password nguva dzese dzatinoda kutarisa mifananidzo kana mavhidhiyo atakaviga mune ino application. Chengetedzo Photo + Vhidhiyo ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye1,99 euros, asi kwenguva yakati wandei inowanikwa kurodha pasi, zvirinani sekunyora uku. Zvinoda iOS 7 zvirinani kuti zvishande, asi kana tichida kushandisa Touch ID, chishandiso chinofanirwa kutarisirwa neIOS 8 kana kupfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Dzivirira mifananidzo yako uye mavhidhiyo neKachengeteka Photo + Vhidhiyo
Mahofisi eUS Anodonhedza Apple Mhosva Yekuda Kwekuchengetedza Dhata Patents
Apple uye makumi mashanu nemakambani anotsigira vadzidzi ve transgender